Vahoaka tsy matoky mpitandro filaminana sy fitsarana | NewsMada
Tany sy fanjakana tan-dalàna. Fanambin’ny fitondrana amin’izao fotoana izao io. Mby aiza? Hatramin’izao, mampahatsiahy izany hatrany ireo mpamatsy vola. Anisan’ny fepetra takiny ny hoe tany sy fanjakana tan-dalàna. Nefa anisan’ny tsy manaja izany voalohany ny mpampihatra lalàna.
Vao nampahatsiahy ny afitsoky ny mpitandro filaminana eto Madagasikara ny Amnesty International, araka ny tatitra taona 2016/15, tamin’ny herinandro teo. Misy ny famonoana na fitifirana olona mbola vao ahiahina fotsiny: tsy araka ny lalàna, tsy mandalo fitsarana. Eo koa ny fidarohana mpianatra…
Raha ny fanadihadian’ny Afrobaromètre, oktobra 2015: nilaza ny 49% amin’ny Malagasy fa tratran’ny kolikoly ny polisy sy ny zandary “rehetra”. Ary mbola laharana voalohandohany amin’ny fahazoana fitarainana noho ny fanaovana kolikoly ny zandary sy ny fitsarana, raha ny tatitry ny Bianco.
Mbola tsy afa-bela amin’ny kolikoly koa ny fitsarana. Nilaza izany ny 49% amin’ny Malagasy, araka ny fanadihadian’ny Afrobaromètre, oktobra 2015. Anisan’ny mampitaraina ny Bianco, ohatra, ny fandefasana olona ahiahina amin’ny raharaha fanaovana kolikoly eny amin’ny fitsarana, nefa votsotra.
Niaiky ny tonia voalohany mpampanoa eo anivon’ny Fitsarana, marsa 2015, fa misy kolikoly tokoa eny amin’ny fitsarana, na tsy izy manontolo aza. Mbola mafimafy ny resaka kolikoly amin’ny fitsarana eto Madagasikara, raha ny nambaran’ny filohan’ny holafitry ny mpisolovava, ny 20 febroary lasa teo.
Noho ny tsy fahatokisana mpitandro filaminana sy fitsarana, mahazo vahana hatrany ny fitsaram-bahoaka etsy sy eroa. Eo koa ny fitakiana ny fanaovana sy fampiharana dina. Misy milaza fa anisan’ny fanehoan’ny vahoaka ifotony ny tsy fahafaliany amin’ny mpitondra ny fanaovana fitsaram-bahoaka.
Anisan’izany ny tsy fandriampahalemana, ny fidangan’ny vidim-piainana, ny tsy fisian’ny asa, ny tsy firaharahana azy… Tsy moramora ny hoe fampanjakana ny tany sy fanjakana tan-dalàna: miankina amin’ny ataon’ny mpitondra, ohatra tahafina voalohany. Tsy izay ve no anisan’ny antoky ny fahamarinan-toerana?
Une réponse à "Vahoaka tsy matoky mpitandro filaminana sy fitsarana "
rakotosolofo 03/03/2016 à 10:36
tsisy analana ary tsisy anampiana marina tanteraka hafa tsy ny tarehy marika 49%, efa 90% no tsy mahatoky an’io fitsarana io sy ireo mpitandro filaminana ireo